Guy Maxime Ralaiseheno : « tokony hiala koa i Beriziky » (+vidéo) | Site officiel du collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana
Guy Maxime Ralaiseheno : « tokony hiala koa i Beriziky » (+vidéo)
Tsy mitana ny teny nomeny i Beriziky raha hy fahitan’i Guy Maxime Ralaiseheno azy. Araka ny fantatrin’ny maro manko dia nanambara ity praiministra ity fa « ny tondro zotra no mibaiko » azy. Saingy tsy vitany ny nampijanona ny fitsarana ireo miaramila nijoro nitady vahaolana ho an’ny firenena izay latsaka anaty krizy noho ny fanonganam-panjakana notarihin’i tgv sy ny namany. Mbola takiany ihany koa ny fialan’i Chrisitine Razanamahasoa satria efa be loatra ny fahotana vitany teto Madagasikara.
Nambaran’i Guy Maxime teo amin’ny kianjan’ny Finoana fa « ireny didim-pitsarana ireny dia taratry ny tsy fikatsahana vahaolana amin’ny krizy ». Nomelohiny avy hatrany moa ny fihetsiky ny minisitry ny FATE sy ny filohany noho ny fanitsahana marindrano ny tondro zotra izay lalàna velona itondrana ny Firenena amin’izao fotoana.
Nijoro vavolombelona amin’ny hetsika any amin’ny Faritra ihany koa ny filohan’ny fikambanan’ny ben’ny tanàna eto Madagasikara. Tamin’ny sabotsy farany teo dia Toamasina no notroniny tamin’ny hetsika natao tao amin’ny Magro tany an-toerana. Nampita ny hetahetan’ny mpiara-mitolona any an-toerana i Guy Maxime ary nitondra ny fanomezan-toky avy amin’izy ireo amin’ny fahavonona hiatrika ny fahatongavan’ny Filoha RAVALOMANANA amin’ny fotoana ahatongavan’izany. Fantatra fa amin’ny 07 aprily dia ny Ankolafy RAVALOMANANA ao Mahajanga no handray hetsika goavana ao anatin’ny fanentanana ny Faritra.